Ninka adduunka ugu da'da weyn' oo ka kacay Covid-19 - Tilmaan Media
Ninka adduunka ugu da’da weyn’ oo ka kacay Covid-19
Dr Hiluf ayaa sheegay in afar maalmood kaddib markii la dhigay isbitaalka Yeka Kotebe ay xumaatay xaaladda caafimaad ee Aba Tilahun, maadaama uu fayraska ku fiday jirkiisa, waxaana lagu xiray qalabka neefta ku caawiya dadka.
Isku darka 14 maalmood ayuu ku jiray isbitaalka, qalabka neefta ku caawiyana waxaa lagu xirayay in a badan hal isbuuc.
Itoobiya oo ka mid ah dalalka xayiraadaha adag u soo rogay fayraska corona awgiis ayaa laga xaqiijiyay in ka badan 5,000 oo kiis iyo 81 dhimasho.
Xilliyadii ay xaaladda adkeyd
Inkastoo isbitaalka Yeka Kotebe uusan xaqiijin karin in bukaankiisa uu jiro 114 sano, haddana dhakhaatiirta waxay sheegeen inuu ka weyn yahay 100 sano, iyagoo da’diisa ku qiyaasay ilaa 109 sano.
Isagoo dhalinyaro ah ayuu tagay magaalada Addis Ababa kaddib markii uu ka guuray koonfurta dalka Itoobiya, waddankiisana wuxuu kusoo noolaa xilliyadii xaaladda adkeyd.
Wuxuu goob joog u ahaa qabsashadii Talyaaniga intii u dhaxeysay 1935-kii ilaa 1941-kii, afgambigii boqortooyadii Haile Selassie ee dhacday sanadkii 1974-kii, burburkii maamulkii Derg ee 1091-kii iyo hadda oo uu ka badbaaday cudurka Covid-19.
Afar sano ayuu ahaa wadaad diimeed ka tirsan Kaniisadda masiixiga ee dalka Itoobiya.
“Aba” waa xilka baadariyaasha sare la siiyo.
Laakiin markii uu da’da yaraa wuxuu ahaan jiray nin ka shaqeeya korontada, rinjiyeynta guryaha iyo howlo kale, sida uu BBC-da u sheegay wiilka uu awoowga u yahay ee lagu magacaabo Binyam Lulseged Tilahun – oo 24 jir ah.
Wuxuu sheegay in awoowgiis ay xaaladdiisa caafimaad aad u wanaagsaneyd fayraska ka hor, laakiin hadda markii uu cudurka ku dhacay uu codkiisa daciifay, wax dhibaato ah oo kalena uusan qabin hadda.
Si loo yareeyo fiditaanka cudurka, dowladda Itoobiya waxay sharciyo cusub soo saartay bishii April, waxaana la xiray dhammaan goobaha waxbarasada. Sidoo kale waxaa la mamnuucay isu imaashada dadka badan iyo munaasabadaha ciyaaraha. Waxaa kale oo la yareeyay tirada dadka raaca gaadiidka dadweynaha.
Hase yeeshee ganacsiga ayaa si caadi ah u furnaa.
Tiyaatarka Qaranka oo xariga laga jaray